Tantara - XGEAR
Nanomboka tamin'ny vokatra andiany an-dranomasina izahay tamin'ny alàlan'ny famolavolana ny Covers Boat, Bimini Top ary Seat Boat, ary lasa mpitarika ny indostria tsikelikely.
Namolavola ny vokatra lasy an-kalamanjana izahay, indrindra ny tranolay ary ny Pop Up Shelters dia tena malaza amin'ny mpanjifa.
Nanitatra ny vokatra ho amin'ny fitaovam-panatanjahantena izahay ary namolavola ny entana ara-panatanjahantena fialamboly toy ny andiam-panatanjahantena ambony latabatra.Natomboka ihany koa ny Inflatable Stand Up Paddle Board izay nahazo ny fiderana iraisana.
Nanohy ny tsipika vokatra ara-panatanjahantena izahay ary namolavola ny Battle Ropes ho an'ny fanofanana fototra, tohatra tohatra Agility ary vokatra andiany Yoga.
Namolavola ny Seza Beach ivelan'ny trano izahay ary nangataka patanty momba ny bika amerikana.Ho an'ny iray hafa, nanatsara ny ISUP izahay tamin'ny fanatsarana ny fizotran'ny fatorana sy ny endriny, izay maharitra sy lamaody kokoa.
Mifantoka amin'ny fanatsarana ny famolavolana ny vokatra andiany an-dranomasina izahay, ary koa ny fanatsarana ny firafitry ny vokatra ara-panatanjahantena.Amin'ny ho avy dia ho liana hatrany amin'ny fanavaozana ireo vokatra efa misy izahay ary hanitarana vokatra isan-karazany hifanaraka amin'ny fomba fiainanao.
Nanomboka tamin'ny 2021